Fanakalozam-bola atiny ho an'ny orinasa ho an'ny tsenan'ny famatsian-gazety maoderina: mpanazava | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Delivery » Fanakalozam-bola atiny ho an'ny orinasa ho an'ny rojom-panolorana haino aman-jery maoderina: mpanazava
Chief Officer Officer, Signiant
Ao amin'ny indostrian'ny fampitam-baovao ankehitriny, ny famindrana votoaty be dia be haingana sy azo antoka eo amin'ny mpiara-miombon'antoka dia manakiana. Ny fifanakalozana atiny mandeha ho azy eo amin'ny orinasa, eo anelanelan'ny orinasa amin'ny habe sy jeografia rehetra, dia manandanja amin'ny famokarana ary mainka ny fizarana sarimihetsika mavitrika sy isan-karazany, fandaharana amin'ny fahitalavitra, lalao video, fananana OTT / VOD, sy ireo singa mifandraika amin'izany ary metadata amin'ny teboka marobe ao amin'ny rojom-panomezana sy manerana an'ireo sehatra marobe.
Ny fahamarinana fototra ankehitriny dia ny tsy fisian'ny fikambanana. Ny ligy ara-panatanjahantena dia miara-miasa amin'ireo mpanapariaka sy ireo manana fahazoan-dàlana amin'ny zon'ny media manerantany; ny studio dia mizara ny atiny amin'ny sinema, tobin'ny fahitalavitra ary mpandraharaha tariby, sehatra VOD, ary sehatra OTT; ny tafiky ny mpamorona lalao sy ny mpanandrana eran'izao tontolo izao dia miara-miasa amin'ny famokarana traikefa amin'ny lalao blockbuster. Tsy azo atao izany raha tsy misy ny fifanakalozana atiny matanjaka sy azo antoka izay afaka miasa na ao anaty na eo amin'ny orinasa.
Ny famindra sy ny fidirana atiny misy eo amin'ny ekipa ao anaty fikambanana dia mety ho fanamby ho azy manokana. Ny fahafaha-manao izany amin'ny fikambanana samihafa dia mampitombo ny fahasarotana. Raha jerena ny satan'ny indostria amin'ny taona 2020, ny asan'ny orinasa dia ny mahazatra ary ny orinasa dia tokony afaka mifanakalo haingana sy milamina tsara ny atiny - ilaina izany.
Fifanakalozana votoatin'ny orinasa: fiaraha-miasa manerantany, atiny eo an-toerana
Fantatry ny orinasa M&E fa mitombo ny filàna sy ny mpamily fiara mitaky fiaraha-miasa hiantohana ny famoronana sy ny fizarana ny atiny. Ny fitomboan'ny tinady ny atiny eo an-toerana amin'ny sehatra vaovao isan-karazany dia mampiseho bebe kokoa ny filan'ny fiaraha-miasa mifamatotra amin'ny fantsom-pivarotana lehibe sy sarotra. Na ny filàna mamokatra atiny hizarana amin'ny sehatra manerantany na ligin'ny fanatanjahantena izay manasongadina ny tambajotran'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampielezam-peo, dia miharihary fa mifamatotra hatrany ny orinasan-tserasera, ny ekosistemin'izy ireo dia misimisy kokoa, ary ny fangatahana hifindra atiny bebe kokoa ary tena ilaina kokoa. Ny an'ity tranonkala efa mikorontana ity dia misy fipoahana endrika sy sehatra samihafa (teatra, tranokala streaming, fampiharana media mobile) izao fotsiny dia manome tsindry bebe kokoa amin'ireo fikambanana mba hampivelatra ny fifanakalozana atiny misy ifandraisany amin'ny orinasa.
Androany ny orinasa M&E dia afaka mizara ny votoatiny manerantany amin'ireo sehatra sy mpanome maro samihafa izay mahatonga ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa ho zava-dehibe kokoa noho ny teo aloha. Na sehatra VOD mandefa atiny ho an'ireo mpandraharaha tariby, trano fizarana horonantsary mandefa DCP amin'ny sinema, na tambajotram-pahitalavitra mampihetsi-po ny votoaty, ny fizarana maoderina dia mitaky rojom-pifaneraserana mifamatotra amin'ny alàlan'ny famindrana mandeha ho azy sy ny orinasa.
Fampandrosoana lalao manaraka ny masoandro
Na, diniho ny mpamorona lalao iray miasa amin'ny studio hafa amin'ny lohateny blockbuster farany. Rehefa manova ny fananganana ifantohan'izy ireo ny ekipa ao amin'ny fikambanana iray dia tsy maintsy afaka matoky ny mpiara-miasa aminy fa hahazo ny fanavaozana ny lalao izy ireo, mba tsy ho hitany tampoka ny ora fiasan'izy ireo napetraka dia tamin'ny kinova efa lany andro. Ilaina indrindra izany amin'ny alàlan'ny alàlan'ny masoandro manaraka ny masoandro izay miankina amin'ny ekipa manerana ny faritra maromaro. Ny fahazoana antoka fa ny kinova marina amin'ny fananganana lalao dia toerana tokony hisy rehefa hipetraka hanatanteraka ny asany ny olona manaraka dia zava-dehibe amin'ny fametahana ireo rojom-panolanana sarotra, fihaonan'ny fe-potoana (indrindra amin'ny indostria fanta-daza amin'ny fikitihana farany farany) , ary ny fitazonana, izay mety ho toy ny korontana, baiko ary mahomby.
Ireo angona angon-drakitra sarotra toa ny endrika endriny isam-baravarana
Na dia mandeha matetika aza ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa mandritra ny fanangonana sy ny fizarana, dia mety ho fanamby ihany koa izany mandritra ny dingan'ny famoronana atiny. Rehefa miasa amin'ny blockbuster lehibe ny studio aorian'ny famokarana sy ny trano VFX, dia matetika izy ireo no hiasa amina endrika isam-baravarana toy ny DPX na EXR. Amin'ireto tranga ireto dia mila afindra any amin'ny studio na koa any amin'ny trano famokarana hafa ny lahatahiry misy rakitra an-tapitrisany, ary koa amin'ny fomba manaraka. Fitaovana mahazatra no miady amin'ireto andian-angon-drakitra sarotra ireto ary noho izany dia ilaina ny rindrambaiko mety hamerenana azy ireo.
Mampifandray ireo orinasa fampahalalam-baovao lehibe indrindra amin'ireo mpiara-miasa aminy SMB
Fanamby iray manohintohina ny indostria ny teknolojia mandroso ampiasain'ny orinasa lehibe tsy azo idirana amin'ny tambajotran'ireo mpamatsy kely tena ilaina amin'ny indostria. Ny fandrosoana amin'ny haitao rahona, indrindra ny vahaolana SaaS, dia manampy amin'ny famotehana ireo sakana ireo, manolotra orinasa kely fitaovana matanjaka handray anjara mora kokoa amin'ny rojom-pamokarana manerantany. Mihalehibe ireo fanamby amin'ny fiarovana rehefa miasa miaraka amina orinasa marobe, izay maro no kely. Ny fananana fitaovana iraisana iraisana hahatratrarana ny fenitra fiarovana avo lenta takian'ny indostria ankehitriny dia tsy lafo vidy fa ilaina. Tsy ny fitaovana ihany no tokony hiantoka ny atiny atakalo, fa tokony ho mora aparitaka, hitantana ary ho refy ary omena vidiny izy ireo raha raisin'ireo orinasa habe rehetra.
Ahoana ny fanamorana ny fifanakalozana atiny eo amin'ny orinasa
Signiant dia mpamatsy vola azo itokisana hatrizay ho an'ny fifanakalozana votoaty ampiasana orinasa eo amin'ny sehatry ny orinasa. Ny vokatra Manager + Agents dia ampiasain'ny orinasan-tserasera manerantany ho an'ny fifanakalozana atiny mandeha ho azy na eo amin'ny orinasa sy eo amin'ny orinasa. Ny vokatra Media Shuttle anay dia ahafahan'ny olona miditra sy mizara atiny manerantany ary mampifandray orinasa maherin'ny 25,000 amin'ny habe rehetra.
Rehefa nandefa ny Signiant Jet ™ izahay tamin'ny taon-dasa, natambatra ny fahaizanay amin'ny hetsi-panoherana ny rafitra-sy-rafitra mandeha ho azy miaraka amin'ny fitarihantsika SaaS zanatany rahona. Izany dia nahatonga ny haino aman-jery mandeha haingana sy haingam-pandeha ho azon'ny orinasa manana habe rehetra ary nampihena be ny fifandirana ho an'ireo orinasan-tserasera lehibe indrindra manerantany amin'ny fametrahana fifanakalozana atiny mandeha ho azy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy kely kokoa.
Tany am-piandohan'ity taona ity dia nanitatra ny fahaizan'ny orinasa i Signiant, nanampy mekanika maivana nefa azo antoka ho an'ny Jet ho an'ny fifanakalozana atiny mandeha ho azy eo amin'ny orinasa. Miaraka amin'izany, orinasa roa izay samy manana an'i Jet dia afaka mametraka fifampitokisana amin'ny fomba tsotra sy azo antoka, tantanan'ny rahona tanteraka. Ho fanampin'izay, miaraka amin'ireo orinasa marobe mihatra amin'ny Jet, ny orinasa dia afaka manao izay hahitan'izy ireo ny fiafaràn'izy ireo ao amin'ny sehatra rahona izay manamora kokoa ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa.
Raha vantany vao misy ny fifampitokisana eo amin'ny orinasa roa dia afaka manangana fifanarahana ifanarahana amin'ny asa famindrana izy ireo izay ahafahan'ny roa tonta mifehy tanteraka ny fitehirizany sy ny tambajotran'izy ireo manokana. Tsy mila fizarana teny miafina na fampahalalana saro-pady hafa satria ny fifanomezan-tanana dia tantana soa aman-tsara ao amin'ny rahona. Tombony lehibe sy fanavahana ny sehatry ny SaaS hybrid patanty an'ny Signiant izay anoloran'ny fiaramanidina fanaraha-maso rahona orkestra, fahitana ary fifehezana fidirana fa ny atiny mihetsika mivantana avy amin'ny tahirin'ny orinasa iray mankany amin'ny iray hafa.
Fifanakalozana atiny ho an'ny orinasa ho an'ny vanim-potoana maoderina
Ny indostrian'ny haino aman-jery sy ny fialamboly dia tsy mbola nisy toa izao, maneran-tany, na mavitrika noho ny ankehitriny, ary vao haingana izany fironana izany Ny areti-mandringana sy ny fiatraikany amin'ny indostria dia mampiseho ny filàna miovaova, mailaka ary afaka mifandray amin'ny rojo famatsiana lehibe kokoa sy maro samihafa. Ka inona no tokony hoeritreretinao hanomanana anao amin'ny hetsika misy fiantraikany amin'ny indostria manaraka?
Ny famindrana angon-drakitra tena marefo, lehibe sy sarotra eo anelanelan'ny orinasa amin'ny vanim-potoana maoderina dia mitaky fomba vaovao. Mila rindrambaiko afaka miasa amin'ny orinasa lehibe rehetra izy io, izay afaka manararaotra izay bandwidth misy, ary afaka miasa miaraka amin'ireo karazana fitehirizana. Izy io dia tsy maintsy manome filaminana sy fahitana eo amin'ny sehatry ny orinasa; vahaolana manome ny fahamendrehana rehefa tery ny fe-potoana ary mahasarotra ny fepetra. Tokony ho mora ny mametraka sy miasa ary mamela ny orinasa ho mailaka ary hamaly ny natiora mavitrika amin'ny indostria. Signiant Jet miaraka amin'ny fahaizany eo amin'ny orinasa dia noforonina mba hahafeno ireo filany ireo.
Liana amin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny Jet sy ny fahitana azy amin'ny hetsika?
Previous: Casting Mpamokatra
Next: GB LABS SHOWCASES STORAGE SOLUTIONS HERINANDRO AMIN'NY BROADCASTASIA VIRTUAL